Regular School Announcement – Mandalay International Science Academy
July 23, 2020 Wai Yan
MISA is ready to begin face-to-face classes, with all safety precautions taken, and the school start date will be announced as soon as we get the green light from the relevant ministries.
Textbooks are now available, and parents can pick these up from school. In order to avoid crowding, this will be done according toastrict schedule. The school office will call you personally to let you know the time and day that you can pick up your children’s textbooks.
In case you have not been informed of the refund policy, all parents who are currently enrolled will receive the following refunds for the first two months of the school year, to be deducted from the following school year’s tuition fees:
Primary Students: 15%
Secondary Students: 10%
IGCSE Students: 5%
Any students missing the online learning period and enrolling in August will receive the same discount, to be deducted from the current school year’s tuition fees.
Transfers to the next school year are no longer possible, as over month of classes has already passed.
If you have any questions or concerns, please call the following numbers: 02-4072753, 09-43060027 or 09-43060423.
You are also able to make appointments with school admin or office staff, either in person or online.
Thank you for choosing MISA
MISA အနေဖြင့် လိုအပ်သည့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး ဖြစ်သည့် ပုံမှန် စာသင်ကြားခြင်း စတင်ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ခွင့်ပြုချက် ရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ကျောင်းဖွင့်မည့်ရက်ကို ကြေညာပါမည်။
ပုံနှိပ်စာအုပ်များ ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မိဘများ ကျောင်းသို့ လာ ယူနိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ကျောင်းတွင်း လူစုလူဝေး မဖြစ်စေရန်အတွက် အတန်းအလိုက် စာအုပ်လာယူချိန် အချိန် အတိအကျ သတ်မှတ်ထားပါမည်။ မိဘများ စာအုပ် လာယူပေးရမည့်အချိန်အား ကျောင်းရုံးခန်းမှ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
လူကြီးမင်းတို့အား ကျောင်း၏ သင်တန်းကြေး လျှော့ပေါ့ပေးမည့် မူဝါဒအား ထပ်မံ အသိပေး အကြောင်းကြားလိုပါသည်။ ယခု စာသင်နှစ် ကျောင်းအပ်နှံထားသော မိဘများအတွက် စာသင်နှစ် ပထမ နှစ်လစာမှ အောက်ပါအတိုင်း သင်တန်းကြေး ပြန်လည် လျှော့ပေးမည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပြန်အမ်းရမည့် ပမာဏ အား လာမည့် ပညာသင်နှစ် သင်တန်းကြေး ကျောင်းလခမှ ခုနှိမ်ပေးသွားပါမည်။
မူလတန်း ကျောင်းသားများအတွက် ၁၅%
အလယ်တန်း ကျောင်းသားများအတွက် ၁၀%
IGCSE ကျောင်းသားများအတွက် ၅%
အွန်လိုင်းမှ သင်ကြားမှု မတက်ရောက်သေးဘဲ ဩဂုတ်လ ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင်မှ စ တက်မည့်သူများအတွက်လည်း အဆိုပါ သင်တန်းကြေး လျှော့ပေါ့ပေးမှု အစီအစဉ်အတိုင်း အကြုံးဝင်ပါသည်။ တစ်နှစ်စာ သင်တန်းကြေး ကျောင်းလခမှ အထက်ပါအတိုင်း လျှော့ပေးပါမည်။
စာသင်ကာလ တစ်လကျော် ကြာပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် လာမည့် ပညာသင်နှစ်သို့ သင်တန်းကြေး လွှဲပြောင်းသတ်မှတ်ပေးခြင်းအား ဆက်လက်စီစဉ်ပေးနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
လူကြီးမင်းတို့ အသေးစိတ် သိလိုသည် ရှိပါက ဖုန်းနံပါတ် 02-4072753, 09-43060027, 09-43060423 တို့အား ဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျောင်း အုပ်ချုပ်သူများနှင့် ကျောင်းရုံးဝန်ထမ်းတို့နှင့်လည်း ဖုန်းဆက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက်ဖြင့်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
MISA ကျောင်းအား ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
လူႀကီးမင္းတို႔အား ေက်ာင္း၏ သင္တန္းေၾကး ေလၽွာ့ေပါ့ေပးမည့္ မူဝါဒအား ထပ္မံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားလိုပါသည္။ ယခု စာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံထားေသာ မိဘမ်ားအတြက္ စာသင္ႏွစ္ ပထမ ႏွစ္လစာမွ ေအာက္ပါအတိုင္း သင္တန္းေၾကး ျပန္လည္ ေလၽွာ့ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ျပန္အမ္းရမည့္ ပမာဏ အား လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းေၾကး ေက်ာင္းလခမွ ခုႏွိမ္ေပးသြားပါမည္။
မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၁၅%
အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၁၀%
IGCSE ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၅%
အြန္လိုင္းမွ သင္ၾကားမႈ မတက္ေရာက္ေသးဘဲ ဩဂုတ္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္မွ စ တက္မည့္သူမ်ားအတြက္လည္း အဆိုပါ သင္တန္းေၾကး ေလၽွာ့ေပါ့ေပးမႈ အစီအစဥ္အတိုင္း အၾကဳံးဝင္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာ သင္တန္းေၾကး ေက်ာင္းလခမွ အထက္ပါအတိုင္း ေလၽွာ့ေပးပါမည္။
စာသင္ကာလ တစ္လေက်ာ္ ၾကာၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္သို႔ သင္တန္းေၾကး လႊဲေျပာင္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းအား ဆက္လက္စီစဥ္ေပးနိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
လူႀကီးမင္းတို႔ အေသးစိတ္ သိလိုသည္ ရွိပါက ဖုန္းနံပါတ္ 02-4072753, 09-43060027, 09-43060423 တို႔အား ဖုန္းေခၚျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း႐ုံးဝန္ထမ္းတို႔ႏွင့္လည္း ဖုန္းဆက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာေရာက္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
MISA ေက်ာင္းအား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။